I-China Electrical kunye ne-automation yomzi mveliso ogqibeleleyo kunye nabaxhasi | Zhongshuo
1. Ulawulo oluzenzekelayo lomgca wamkela ulawulo oluqingqiweyo + ekude nolawulo lwe-I / O. I-PLC, i-MCC kunye nomlawuli wedrive zidityanisiwe kwikhabhathi yokulawula ephambili ukulungiselela abasebenzisi ukuba bayilondoloze kwaye babekwe kuyo. Ukulawulwa kwe-HMI kunye ne-I / O ekude kudityaniswe kwikhonsoli yentsimi okanye ibhokisi yosasazo, kusetyenziswa ulawulo lonxibelelwano lwebhasi yonxibelelwano. 2. Ukubonelela ngombane kumgca manqanaba ombane wecingo leemitha ezintlanu, ebonelela ngombane nge-PLC, i-MCC kunye neyunithi yokuphinda ...
1. Ulawulo oluzenzekelayo lomgca wamkela ulawulo oluqingqiweyo + ekude nolawulo lwe-I / O. I-PLC, i-MCC kunye nomlawuli wedrive zidityanisiwe kwikhabhathi yokulawula ephambili ukulungiselela abasebenzisi ukuba bayilondoloze kwaye babekwe kuyo. Ukulawulwa kwe-HMI kunye ne-I / O ekude kudityaniswe kwikhonsoli yentsimi okanye ibhokisi yosasazo, kusetyenziswa ulawulo lonxibelelwano lwebhasi yonxibelelwano.
2. Ukubonelela ngombane kumgca manqanaba ombane onamacandelo amahlanu eengcingo ze-AC, ezibonelela ngombane we-PLC, MCC kunye neseti yokuhlaziya ngokulandelelana. Ulawulo lokuqhuba lamkela indlela eqhelekileyo yebhasi yeDC yokugxininisa kumbane, ukusombulula ingxaki yokuvelisa amandla ngokutsha kunye nokuphucula umgangatho wokusetyenziswa kwamandla ukufezekisa injongo yokonga amandla.
3. I-CPU yamkela isizukulwana esitsha se-Nokia isasatics7- 1500 yechungechunge lweCPU, eneenzuzo zedijithali epheleleyo, ukucwangciswa simahla, ixesha lokwenza imisebenzi emininzi, inkqubo yokulawula itemplate kunye nokufakwa kwe-rack, ukubonelela ngemeko efanelekileyo yokusebenza ngokuzinzileyo izixhobo.
4. Ulawulo olukude lwe-I / O lwamkela ulawulo lwebhasi yonxibelelwano ye-PROFINET, eneenzuzo zesantya esikhawulezayo, ukuthembeka okuphezulu, ukukwazi okwandisiweyo, ukubamba kancinci kunye nokwakha ngokukhawuleza.
5. Isikrini se-HMI sinika isibonisi somatshini esisebenza ngokupheleleyo, esijongene nemisebenzi ephambili: ukufaka idatha eluhlaza, ukufakwa kwepharamitha, ukuboniswa kwedatha eqingqiweyo, ukuqhutywa kwesixhobo sokulawula, ukuboniswa kolwazi lwe-alamu, isibonisi sokumisa umqondiso wokufaka, njl.
6. Umgca une-othomathikhi yokuhamba ngokungalawuleki / ukubuyela umva, ukubalwa kwe-servo-diameter ezenzekelayo, ukulawulwa koxinzelelo oluzenzekelayo oluzenzekelayo, ulawulo lwethambeka oluzenzekelayo. Ngokusebenzisa inani le-algorithms yokunciphisa ungenelelo lomntu, ukunciphisa umthwalo wabasebenzi.
7. Ulawulo lwe-vector ye-Nokia kunye nee-inverters ziya kukhethwa kwinkqubo yomgaqo wesantya we-AC, ngokweemfuno zomsebenzisi zokutshintsha ubumbeko okanye uphawu.
Edlulileyo: Izixhobo ezincedisayo zekhoyili ukuya kumda wekhoyili
Okulandelayo: Ukuhlamba & Umatshini wokuhlamba